Mandela spends 95th birthday in hospital - DailyNews Live
BBC News • 18 July 2013 7:20AM • 1 comment
JOHANNESBURG - Nelson Mandela is spending his 95th birthday in hospital in Pretoria, as events take place around the world and in South Africa in his honour.
Ko zvamaimbotizve hanzi Mandela anzi abviswe palife support nokuti akafa kare? Ndakatoverenga Herald raiita sekunzi Mandela akafa asi vanhu vari kushungirira kuti asvitse birthday rake chete! Matauriro aiita Herald aiva ekuti people are needlessly prolonging the suffering of a man who should be dead. But yet someone has been on life support at Parirenyatwa since 2010.
Hwezhachikara - 18 July 2013